Vaovao momba ny literatiora izay mitondra anao any amin'ny vanim-potoana hafa | Bezzia
Maria vazquez | 14/10/2021 12:00 | ankehitriny
Amin'ity volana ity isika dia mamakivaky ireo zava-baovao literatiora efatra ireo amin'ny vanim-potoana hafa. Ataontsika amin'ny alàlan'ny Mpanoratra tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX toa an'i Louisa May Alcott, Anne Brontë na Flora Thompson, ary Anne Hébert sy ireo vehivavy mpihetsiketsika. Vonona ny hankafy ny tantaranao?
1 Ny lakile miafina sy izay nosokafany
4 Ny gannets
Ny lakile miafina sy izay nosokafany
Mpanoratra: Louisa May Alcott
Nandika: Micaela Vázquez Lachaga
Toa manjaka ny fitiavana ao amin'ny tranon'ny olona ambony Richard sy Alice Trevlyn, miorina amin'ny ambanivohitra bucolic anglisy; Na izany aza, ny fitsidihana tsy fantatry ny olon-tsy fantatra ary teny vitsivitsy nifanakalozana teo aminy sy ny vadiny, izay henon'i Alice mangingina, no fiandohan'ny loza tsy hay hazavaina izay hanova mandrakizay ny fiadanam-pianakaviana Trevlyn. Vaovao mahatsiravina inona no nentin'ny mpitsidika azy? Fa maninona i Alice no latsaka anaty toe-batana malemy ara-batana sy ara-tsaina izay tsy afaka manamaivana ny fisian'i Lillian zanany akory? Ahoana ny fisehoan'i Paul, taona vitsivitsy aoriany, tovolahy miditra amin'ny fanompoana an'i Lady Trevlyn sy ny zanany vavy adolantsento, amin'izany rehetra izany? Ary inona no hanokatra ny lakilen'ny miafina izay manome ny lohatenin'ity tantara fohy mahafinaritra ity?
Feno ahiahy amin'ny pejy farany, Ny lakilen'ny miafina sy izay nosokafany dia, araka ny voalaza tao amin'ny fampidiran'i Micaela Vázquez Lachaga, mpandika ny sanganasa, "fitambaran-tsakafo izay tsy isalasalana fa hahasarika ny mpamaky rehetra mankafy tantara miafina sy tantaram-pitiavana tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, ary koa izay mankasitraka ny sanganasa literatioran'i Louisa May Alcott ary te hahalala ny lafiny gothic sy mahaliana kokoa azy ”.
Mpanoratra: Anne Brontë
Nandika: Menchu ​​Gutiérrez
Endrey ny mahafinaritra raha lasa governess! Mandehana amin'izao tontolo izao ... mahazoa ny fivelomako ... Ampianaro ny tanora hatanjaka! " Izany no nofinofy zanakavavin'ny mpisolo toerana maotina, idealy fahaleovan-tena sy fiankinan-doha manokana, ary fanoloran-tena amin'ny asa ambony toa ny fanabeazana. Raha vantany vao tanteraka anefa, dia asehon'ireo olona ao amin'ity nofinofy ity fa toy ny biby goavam-be: zazakely mahery setra, tovovavy mikorontana ary tovovavy maditra, raim-pianakaviana mahatsiravina, reny maloto sy misetrasetra ... toy ny mpanampy vavy.
Agnes Gray (1847), tantaran'i Anne Brontë voalohany, dia fanambarana maina mifototra amin'ny zavatra niainan'ny autobiografikan'ilay toe-javatra mampidi-doza, ara-nofo ary ara-pitondrantena, avy amin'ny governemanta Victoria; ary miaraka amin'izay koa dia tantaram-pitiavana akaiky sy saika miafina momba ny fitiavana sy ny fahafaham-baraka, izay anaovan'ny "tena henjana indrindra" sy ny "tena mora tohina" ny ady goavana amin'ny famaritan'ny mahery fo azy ho "loko mainty an'ny tontolo ambany , ny tontoloko ”.
Mpanoratra: Flora Thompson
Nandika: Pablo González-Nuevo
Mpamoaka: Tin Sheet
“Ny tolakandron'ny volana septambra mafana tamin'ny faramparan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia nisy zazavavy iray niampita ny sisin-tanin'i Hampshire ho any Heatherley. Akanjo volon'ondry volontsôkôlà sy satroka volon'ondry nohaingoina tamin'ny volom-boankazo kely roa. Ny akanjo farany ambany indrindra eto an-tanindrazana. »
I Flora Thompson, tovovavy foronina no tovovavy, ary ny tanàna alehany, Grayshott, toerana nipetrahan'i Flora tamin'ny 1898 ho mpitantana paositra. Miandry azy any i Hertford ratsy fanahy, ny mpampiasa azy; mpanjifa manavaka toa an'i Arthur Conan Doyle na Georges Bernard Shaw, mpampiasa mahazatra ny telegraph eo an-toerana; na ny butikety maditra an'i Madame Lillywhite ("milina fametahana, fanamboarana ary fampindrana boky"), izay ahafahan'i Laura mandoa famakiana vaovao indraindray.
Tamin'ny vanim-potoanan'ny bisikileta nanetry tena, ny sary Kodak voalohany sy ny suffragette nahatsiravina, Heatherley dia toko vaovao amin'ny fiainan'i Laura milamina sy mahaleo tena, totozy kely any an-toerana - araka ny iantsoan'ny namany maoderina azy fin de siècle - izay fonenany voajanahary dia ny ala sy ny natiora foana izay nihaonantsika voalohany tamin'ny fomba mahafinaritra Candleford Trilogy.
Mpanoratra: Anne Hébert
Nandika: Luisa Lucuix Venegas
Los alcatraces no mandika ny tontolo masiaka sy tsy mendrika ataon'ny vondrom-piarahamonina miteny anglisy kely, notorotoroin'ny onja katolika miteny frantsay. Femina Prize 1982, ity tantara ity dia maneho ny fihaonana amina loza mahafaty iray marihin'ny heloka bevava sy ny barabasy. Fanasana ho an'izao rehetra izao henjana sy tononkalo nataon'i Hébert.
Tamin'ny 31 Aogositra 1936, tanora roa, Olivia sy Nora Atkins, nanjavona izy ireo any Griffin Creek, tanàna kanadiana izay toa maharitra hatrany ny haizina. Nialona ny hatsaran-tarehin'izy ireo izy ireo, very eo amoron-dranomasina dia ny lalan'izy ireo. Ny sarin'ireo zazavavy dia mifangaro amin'ny tontolo an-dranomasina, ary ny rivotra dia mamafy toetr'andro ratsy, tonga lafatra amin'ny vinavinam-bika, izay kapoka ny voarara sy ny mpanota. Vetivety dia tapaka fa ny tsy fahatongavany dia vokatry ny kisendrasendra: efa ela no nahalasa loza. Amin'ny alàlan'ny feon'ny tarehin-tsoratra, ary koa ny taratasy sasany, dia vavolombelona izahay fa misy dingana iray tsy azo sakanana izay nahatonga ilay loza tampoka hanakorontana ny vondrom-piarahamonina, tafahoatra amin'ny fomban-drazana ary ao amin'ny antokom-pinoana iray miharatsy. Ary ny hiafaràn'ny tanàna kely Quebec dia toa iharan'ny fanorenan'Andriamanitra.
Iza amin'ireo zava-baovao ireo no tena tianao hamakiana? Mitranga aminao toa ahy ve ny fitiavanao azy rehetra? Tsarovy fa isam-bolana ao Bezzia izahay dia mizara vaovao ara-literatiora aminao ary tamin'ny volana lasa dia nanokana azy io izahay asa izay miatrika ny manirery. Raha liana amin'ilay lohahevitra ianao dia zahao izy ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Vaovao momba ny literatiora izay mitondra anao any amin'ny vanim-potoana hafa